Bilaogera Tshadiana Nofonjaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Avrily 2013 3:56 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Aymara, Français, English
Nitatitra ny Internet Without Borders (Internet tsy misy sisintany) fa nosamborin'ny miaramila tao N'Djamena, renivohitr'i Tshady tamin'ny 22 marsa i Jean Laokolé, mpanoratra sady bilaogera Tshadiana. Nisy ny fanangonan-tsonia natao ny andron'ny 9 avrily nilazàn'ilay vondrona nisolovava fa “nosamborin'olona manao fitafiana sivily [i Laokolé] raha iny nitondra fiarakodia niaraka tamin'ny fianakaviany iny.” Miantso ho amin'ny “famitsorana tsy misy hatak'andro sy tsy misy fepetra” ilay bilaogera ny fanangonan-tsonia.
Manoratra ambadika solon'anarana amin'ny bilaogy iray anisan'ny malaza indrindra ao Tshady i Laokolé. Hatramin'ny nisamborana azy, notazonina tsy misy fitsarana amin'ny toerana tsy nolazaina i Laokolé, hoy ny fanazavan'i Julie Owono, Biraon'i ‘Internet Without Borders’ eto Afrika. manoratra i Owono:
Jean Laokolé dia nandray anjara tamina anarana iray tao amin'ilay bilaogy Tshadiana malaza http://makaila.over-blog.com/. Ao amin'ny lahatsorany izy no mitsikera ny kolikoly, tsy fahaiza-mitantana ary ny kiantranoantrano manjaka ao amin'io firenena anisan'ny afovoan'i Afrika io. Nisy ny nahafahan'ny sampam-pitsikilovana nahafantatra azy.
Jean Laokolé (sary avy amin'ny Internet Without Borders)
Tao akaikin'ny toby miaramila antsoina hoe “Toby Amsinene” no nahitana farany an'i Laokolé tamin'ny 25 marsa. Nolazain'ny mpikatroky ny zon'olombelona tao an-toerana tamin'ny Internet Without Borders fa malaza amin'ny fitazonana gadra politika io toby io. Nanangona tahirin-kevitra [PDF] momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona mpitranga ao Amsinene ny Amnesty International tamin'ny 2012. Araka ny Amnesty International, dia nipoitra avy ao amin'ny fianakaviana mafana fo ara-politika lasibatry ny mpitondra fanjakana hatry ny taloha i Laokolé. Mpitarika politika mpanohitra sy filoha lefitry ny vondron'antoko politika ao amin'ny fanoherana ny rainy Jean-Baptise Laokolé. Toy izao ny nosoratan'ny Internet Without Borders amin'izay mety ho antony nisamborana an'i Laokolé:
Araka ny loharanom-baovao maro, ao anatin'izany ny avy ao amin'ny fianakaviana, nitrerona an'i Jean Laokolé ny polisy …noho ny lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny bilaogy araka ny fiheverana. Noahiahiana ho “nanendrikendrika amin'ny tsy marina” vondron'olona izay [mety ho nametraka] fitoriana azy izy. Nizotra tany ho any ny fanaovana marimaritra iraisana teo amin'ny rehetra: Nifanaraka ry zareo tamin'ny farany fa hanoratra fialan-tsiny ao amin'ny bilaoginy i Jean Laokolé sy handefa taratasy fialan-tsiny ihany koa amin'ireo heverina ho voaendrikendrika tao amin'ny bilaoginy. Izany no saiky nataony tamin'ny 23 marsa.